प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा - Eall Nepal
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा
रुपन्देही, फागुन ३ । प्रदेश नम्बर ५ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल वि.स. २०१९ फागुन १५ गते दाङ तुलसीपुर उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–१९, बिजौरीमा बुवा केशवराज शर्मा र आमा तिलका देवीको कान्छो सन्तानका रुपमा जन्मनु भएको हो ।
उहाँ अहिले नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलकी श्रीमती एमाले नेत्री सुजिता शाक्य अहिले एमाले केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल महिला संघको सचिव हुनुहुन्छ । उहाँहरुका दुई छोरी छन् ।
जननेता स्वर्गिय मदन भण्डारीसँग निकै निकट रहेर काम गरेका पोखरेलले अनेरास्ववियुका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्ववियु सभापति जस्ता भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ । वि.स. २०३६ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५÷४६ मा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका पोखरेलले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा काठमाडौँको मोर्चाबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
अहिले पार्टीमा पोखरेलले पार्टी स्कूल विभागको उपप्रमुखको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने काममा पोखरेल निकै सक्रिय हुनुहुन्छ ।
विगतमा पार्टी सचिवको रुपमा काम गरिसक्नुभएका पोखरेलले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नु भएको छ । पोखरेलका राजनीतिक, वैचारिक र समाजका विविध क्षेत्रमा थुप्रै पुस्तक र लेख रचना प्रकाशित छन् । उहाँले साहित्य सिर्जनातर्फ पनि उत्तिकै सक्रियताका साथ कलम चलाउनुभएको छ । पोखरेलले ‘युगलहर’, ‘सिमानापारिको हुङ्कार’, ‘राष्ट्रिय विकल्प’, ‘राष्ट्रिय सङ्कल्प’ लगायत पत्रिका र साहियित्क रचना संग्रहको सम्पादन पनि गर्नु भएको छ ।
ऐतिहासिक सफलतासँगै दैनिक छापामा यसरी छायो नेपाली क्रिकेट